Faham la’aanta ka jirta qaab dhismeedka wasaaradaha dowladda SOOMAALIYA - Caasimada Online
Home Maqaalo Faham la’aanta ka jirta qaab dhismeedka wasaaradaha dowladda SOOMAALIYA
Qoraalkani waa mid dhaxal reeb u ah, ruux kasta oo uilaaheey u sahlo inuu hoggaanka dalka qabto. Waa qoraal ku saabsan muhiimadaha koowaad ee laga doonaayo in ay ka miro dhaliso xukuumadda cususb ee soo socota. Dunidan waxaa horumar baahsan gaara dalka kulansada labo arrimood, dad aqoon badan leh, iyo dhaqaale baahsan. Soomaalidu waa suurto gal, laakiin tiro badan oo kaafin karta baahiyeheenna muhiimka ah lama heli karo, sidaa awgeed waxaa lagu qasaban yahay aqool tayeysan iyo tabihii looga faaiideysan lahaa inta aan heli karno.
Qaab dhismneedka wasaaradaha ee hadda jira waa mid duugoobay oo laga kaaftoomay (redundant) ee aan la jaan qaadi karin baahiyaha waqtiga la joogo, iyo mustaqbalka. Waxaa is dhex daadsan wasaaradaha soo socda. Wasaradaha laga kaaftoomay ee macno la’aan u jira, halkaaso dhaqaale badan lagu qasaariyo, oo wax faa’iido ah laga helin. Tusaale, wasaarada hawlaha guud iyo guryenta iyo dib u dhiska. Hawlaha guud waa maxay, waa biyaha, korntada, jidadka, buundooyinka, dhismaha dekedaha iyo garoomada diyaaradaha iyo IWM. Waa wasaarada loogu talo galay xilligii shuuciyadda ama hanti wadaagga la dhisay. Xilligaas private sector ma jirin. maanta waxaan leenahay private sector ama hayado gaar loo leeyahay oo hawlahaas qaban kara. Manta dalku waa federal, maamul goboleedyadu iyagaa ku filan iney hawlahaas qabsadaan. Kaliya qandaraas tartan daah furan loo qabto, cidii ku guuleystana laa siiyo. Wasaaradan waxaa laga dhigi karaa Directorate ama agaasin leh 50 qof oo khubaro sare ah ka tala bixiya siyaadaha iyo guud ee hufnaan ee lagu maareynaayo hawlaha aan kor kusoo sheegay. Uma baahna wasaarad ay u shaqeeyaan 500 shaqaale oo mushaar macno la’aan qaata.
Wasaraada xoolaha. Sidoo kale xoolaha dadka iska leh ayaa dhaqda, Berigii hore xoolaha waa dhoofin jirtay dowladda, hadda waxaa dhoofsada dadka iska leh xoolaha. Marka wasaaraddu maxay qabaneysaa??? kaliya waxaa loo baahan yahay khubaro ku xeel dheer caafimaadka xoolaha oo cilmi baaris ku badqabka iyo tayeynta xoolaha Soomaaliya. Sidoo kale wasaarada weynaatay oo ay u shaweeyaan shaqaale tiro badan uma baahna.
Maxkamadda dastuuriga ah iyo garsoor madax banaan. Wali lama hayo. Haddaan sharciga lagu kala baxayn, sow ma muuqato in shargica qof walba siduu doono u fasiran mayo, oo ganmaha la isula tagi mayo. Waa tii dhacday markuu madaxeyne Farmaajo labo sano oo jeebkiisa ku darsaday. Maxaa ka dhashay?
Gobolka Banaadir – xagge lagu arkay Seddex million oo aan matalaad ay soo doorteen aan lahay? Madaxweynihii villa Soomaaliya qabta ayaa siduu doono ka yeela. Canshuurtoodana waxba loogu qaban. Jidadkii laga xiray oo isu sodka shacabka deggen iyo hantidooduba ku baa’ba’aan. Waa maxay caddaalad darrada ka weyn ee bini’aadam samayn karo? Maxaa waxaa la sugayaa in shacabka banaadir deggen hubkood qaatan dabdedna aan la mahadin?
Xaggee lagu arkay dadweyne ama xildhibaano badan oo safaf ugu jira airpt dhexdiisa iney soo dhoweeyan madaxda dalka. Soomaaliya kaliya ayey ka jirta. Sow dhaqan xumo gaamurtay oo in wax laga qabto u baahan. Sow maaha mid ka mid dhaqan xumada dhalisa kali talisnimada.